Ko Toe: January 2007
ရှမ်းလူမျိုးများ ပြောတာဆိုတာ ဘယ်လောက်ရိုးသားပွင့်လင်းသလဲဆိုရင် ..
ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကို မန္တလေးကဘုရားပွဲတစ်ခုကို ခေါ်သွားလေရဲ့။ ဘုရားပွဲဆိုတော့လည်း အငြိမ့်ပါတာပေါ့။ ဒါနဲ့ အငြိမ့်ကြည့်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့လည်း ရပ်ကြည့်ရတာပေါ့။ အဲ .. ခဏအကြာမှာတော့ ရှေ့နားမလှမ်းမကမ်းမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ရှမ်းကလေး တစ်ယောက် အနားကို အခြောက်သုံးလေးယောက်လောက် ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ အခြောက်တို့ပီပီ လက်သရမ်းတော့ .. “နင်နဲ့ငါ” နာမ်စားသုံးပြောလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းရှမ်းကလေး အော်လိုက်ပုံက “ဟေ့ကောင် .. နင့်မှာလဲ ငါ့လိုဟာမျိုးရှိရဲ့သားနဲ့ .. ငါ့ဟာကို ဘာလို့လာကိုင်ရတာလဲ .. နင့်ဟာ နင်ကိုင်ပါလား” တဲ့ဗျာ။ ထိုအော်သံကြောင့် .. မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်တာက ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ဘေးကကြားတဲ့သူတွေပေါ့ ဗျာ။
Posted by MYO HAN HTUN at 10:44 AM7comments
တက္ကသိုလ်တက်ခါစ ကျောင်းသားဘ၀ကပေါ့။ ကိုတိုးတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ညနေစောင်းရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီနဲ့ လူပျိုလှည့်ထွက်ရတာက အမောသားပေါ့ ဗျာ။ လူပျိုလှည့်တဲ့ နေရာတွေကလည်းများများစားစားရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်မလေးအိမ်နား ဝေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့ပေါ့။ ကောင်မလေးကို မတွေ့လည်း သူနေတဲ့ တိုက်ကို ပြုံးကြည့်ပြန်လာရုံပဲပေါ့ ဗျာ။ နောက်တော့ ... သူငယ်ချင်းများသွားရာ မန္တလေးတက္ကသိုလ်နားက အမျိုးသမီးဆောင်တွေလည်းပါသပေါ့။ အဆောင်က မမတို့ကတော့ ဘာပျူငှာလည်းတော့ မမေးလိုက်ပါနဲ့။ (မှတ်ချက်။ ။ပျူငှာကြမှာပေါ့ ဗျ ... “မောင်လေးတို့ရေ ... ဟိုနားလေးလိုက်ပို့ပါဦး” .. “ကောင်လေးရေ ... ဒီနားလေးလိုက်ပို့ပါဦး” ဆိုပြီး ... ခိုင်းကောင်းလို့ပေါ့ ဗျာ။) တစ်ချို့ကလည်း ဘဲတွေ ငနဲတွေ ပိုင်ရှင်တွေ ရှိပါလျှက်နဲ့ “မောင်လေးတို့ရယ် မမတို့မှာလေ မင်းတို့မလာရင် ပြင်းလွန်းလို့” ဆိုပြီး အပြတ်ကိုချွှဲပြတတ်ကြတဲ့ မမမင်းသမီးများလည်း ရှိသေး ဗျာ။
အင်း ... ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီကစရမယ် ...
တစ်ရက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အဆောင်ဘက်ကို အလည်သွားပြီးပြန်အလာ။ ညနေစောင်းလို့ တော်တော်လည်းမှောင်နေလေပြီ။ ကျွန်တော်က ဆိုင်ကယ်မောင်းတယ်၊ သူကနောက်ကနေထိုင်လိုက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ မန္တလေးက ၈၁ လမ်းအတိုင်းမောင်းအလာ ၃၆ လမ်းလောက်အရောက်မှာတော့ အင်မတန်ကို ချောမောလှပတဲ့ နတ်မိမယ်လေးတစ်ပါးကို စတွေ့လိုက်သူက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပါ။ “ကိုတိုး .. ကိုတိုး ဟိုမှာဟိုမှာ ဆော်လေးမိုက်တယ် .. ဟ” ဟုနောက်ကနေ အလှန့်တကြားအော်လိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ .. ကောင်မလေးက တော်တော့်ကို လှတဲ့ ကောင်မလေး၊ သူ့ကြည့်ရတာ တော်တော်လေးလှပါတယ်ဗျာ မျက်နှာလေးကလည်း ၀င်း၊ နှာတံလေးကလည်း စင်း၊ အသားလေးကလည်း ချော ဆိုက္ကားအနောက်မှာ ပေါင်ပေါ်ဈေးခြင်းလေးတင်ပြီး ထိုင်လိုက်လာပါတယ်။ ကောင်မလေးကတော့ အသက်ကတော့ ၂၀ ၀န်းကျင်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဆိုက္ကားအရှေ့မှာတော့ အနောက်ကနေ လူမမြင်ရပေမယ့် အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့တော့ ထင်မိတယ်။ “ကိုတိုး နောက်ကနေအိမ်လိုက်ကြည့်ရအောင်” လို့ပြောတဲ့ အဆုံးမှာ ဆိုင်ကယ်လက်ကိုင်က သူထိုင်လိုက်လာတဲ့ ဆိုက္ကားအနောက်ကနေ ဦးတည်နေပါပြီ။
ဒါနဲ့ သူ့နောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ လိုက်လာပြီး ခဏကြာတော့ ထိုရွှေမင်းသမီးက စပြီးပြုံးပြပါတယ်။ နောက်ကကောင်ကတော့ “ဟ ဟ .. ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင် ဟိုမှာ ငါတို့ကို ပြုံးပြတယ် ကွ” .. လို့အလန့်တကြား အော်ပါလေရော။ ကျွန်တော်ကတော့ “ဒါဆိုရင်တော့ အခြေအနေမဆိုးဘူးကွ .. မီးစိမ်းပြနေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့”။ ဒါနဲ့ ဟိုကောင်ကဘာအတွေးတွေပေါက်သွားလည်းတော့ မသိ .. ဘာစပြောတယ်များမှတ်သလဲ ဗျာ ... “ဟေ့ကောင် ကိုတိုး မင်းမှာ ကြိုက်စရာ ဆော်ရှိတယ်ကွ” “ဒါလေးတော့ ငါ လိုက်မယ်ကွာ ... ဆိုင်ကယ်ကို မင်းမမောင်းတော့နဲ့ ငါပဲမောင်းမယ်လို့” ပြောပြောဆိုဆို ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ “မင်းက ဘကြီးတောင် မသေသေးဘူး ... အမွေလိုချင်နေပြန်ပြီ” ဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်ကို ဘေးထိုးရပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူကဆိုင်ကယ်ကို ရှေ့ကမောင်းပြီး ကျွန်တော်ကနောက်ကထိုင်လိုက်ရင်း အဲ့ဒီ ရွှေမင်းသမီး စီးလာတဲ့ ဆိုက္ကားရဲ့အနောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ မောင်းလာလေရဲ့ ဗျာ။ အဲ့ဒီကောင်လည်း ရွှေမင်းသမီးကို ဆိုင်ကယ်အရှေ့ကမောင်းရင်း ဘာတွေသွားလုပ်ပြလည်းမသိ .. နောက်တော့ ရွှေမင်းသမီးက လျှာထုပ်ပြလိုက် မျက်စိမှိတ်ပြလိုက် နဲ့ ဟုတ်နေတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ “ဟေ့ကောင် မင်းကပ်ပြီးတော့ စကားမပြောလိုက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရှေ့မှာ သူ့ဘွားတော်ကြီးလားမသိဘူး၊ တော်ကြာ ကွိုင်တက်နေလိမ့်အုံးမယ်” လို့ပြောတော့ “ဟေ့ကောင် ကိုတိုး ... ငါတို့အကြည်ဆိုက်နေတဲ့ ကိစ္စကို မင်းမနာလိုမဖြစ်စမ်းပါနဲ့” လို့ မောင်မင်းကြီးသားကနောက်လှည့်ပြောပါလေရဲ့ ဗျာ။ သူ့စကားကြောင့် လူကတော့ အောင့်သက်သက်ပေါ့။
ရွှေမင်းသမီးကလည်း လှလည်းလှပါပေရဲ့ဗျာ။ မြင်သူတကာငေးလောက်တယ်။ မောင်ကိုတိုးတစ်ယောက် “ရွှေမင်းသမီး” အဖြစ်တင်စားထားတာကတော့ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ထားခြင်းကြောင့်ပါ။ (မှန်တာပြော ချမ်းသာပါရစေ) ဟိုကောင်နဲ့ ရွှေမင်းသမီးတို့ကတော့ ကြည်နူးနေကြပုံပဲဗျာ။ နောက်ကထိုင်လိုက်လာတဲ့ မောင်ကိုတိုး မျက်လုံးထဲမှာတော့ ဆိုင်ကယ်မီးရောင်အောက်က ရွှေမင်းသမီးရဲ့ အမူအရာတွေဟာ မင်းသမီးထက်ထက်မိုးဦးလား အမှတ်ရမိပါရဲ့ ဗျာ။ မျက်စပြစ်ပြလိုက်၊ မျက်လုံးမှိတ်ပြလိုက်၊ နှာခေါင်းရှုံပြလိုက်၊ ပြုံးပြလိုက်နဲ့ အမူအရာတွေကစုံစနီဖာပါပဲ ဗျာ။ ဒါနဲ့ ၂၉လမ်းကျော်လို့ မန္တလာဆေးခန်းနားအရောက်မှာ ဆိုက္ကားရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်လည်း ဆေးခန်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခပ်လှမ်းလှမ်းတနေရာမှာ ထိုးရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အထင်ကတော့ သူ့အမေလား ဘာလားတော့ မသိ ထိုအမျိုးသမီးကြီးနေမကောင်းဖြစ်လို့ဆေးခန်းလာတာလား ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဆိုက္ကားအနောက်ကစဆင်းတဲ့ ထိုရွှေမင်းသမီးကို မြင်တော့ နှစ်ယောက်သားပြိုင်တူအော်လိုက်တာက “ဟာ ဟာ .. ဗိုက်ကြီးသယ်ကြီး” ဆိုတာပါပဲဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ် မှားစရာမရှိပါ ဗိုက်ကြီးသယ်မှ ဗိုက်ကြီးသယ်ပါ ဗျာ။ ဗိုက်ကြီးခါစလားတော့ မသိ။ “ပူ”တာလား “စူ”တာလားတော့ မသိ ဗိုက်ကတော့ ပူတာမှ တော်တော်လည်းကြွတက်နေပြီ ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာရယ်မှန်းမသိတော့ ရီလိုက်တာက အူတက်မတတ်ပဲဗျာ။ ဘေးကလူတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ဒီကောင်ဘာများ ဖြစ်သွားတာလည်း ပေါ့။ ဟိုသူငယ်ချင်း မောင်မင်းကြီးသားရဲ့ မျက်နှာမှာ ရှက်ရာတွေချည်းပါပဲ ဗျာ။ တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲ “ဟေ့ကောင် ကိုတိုး လာသွားမယ်လို့ ဆိုပြီး” နောက်တောင် ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပါဘူး ... ထိုနေရာနားကထွက်ခွာခဲ့ရတော့တာပါပဲ။
ဒီအဖြစ်လေးကို သူငယ်ချင်းတွေကြား ရယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်ပြောပြတတ်စမြဲပါ။ တစ်ချို့ကတော့ “မင်းတို့ကတော့ အ ပါကွာ .. ဗိုက်ကြီးသယ် မှန်းတောင် မရိတ်မိဘူးလား” လို့မေးကြတိုင်း “ဘယ်သိမလဲ ... ဗျာ ... သူက ပေါင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ဈေးခြင်းနဲ့ကွယ်ထားလို့” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေရတယ်။ သူငယ်ချင်းအချို့ကတော့ “သူ့မှာ ပိုင်ရှင်လိုနေလို့ နေမှာပါကွာ ... တာဝန်ယူလိုက်ပါ ကုသိုလ်တောင်ရသေး”လို့ စကြပေမယ့် တစ်ချို့ကြတော့လည်း “မင်းတို့ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာကံတော့ ကြွပြီ” လို့စကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ “ဗိုက်ကြီးသယ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာကံလည်း မကြွဘူး .. အဲ့ဒီဆော် အပေါစားအရက်တွေသောက်ပြီး ရေဖျင်းစွဲနေတဲ့ ဗိုက်ကို လာပြတာ” လို့ ဟာသနှောပြောတော့ ရယ်ရတာ ပွက်လောညံပေါ့ ဗျာ။ (သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း မန္တလေးဘူတာရုံမှာ အလားတူအဖြစ်မျိုးလို ပုံစံမျိုးကိုကြုံခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြပါတယ်)
ဒါပေမယ့် ထိုဗိုက်ပူမ ဘာကြောင့် မူယာမာယာအိုက်တင်တွေကို အမျိုးမျိုးလုပ်ပြခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး ဗျာ။
Posted by MYO HAN HTUN at 2:20 PM 12 comments
မှတ်မှတ်ရရ . . . . . ၉တန်းကျောင်းသားဘ၀ကပေါ့ ဗျာ။ အဲ့ဒီ ကောင်မလေးက ညိုချောလေး ဗျ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဗျာ ... မိန်းကလေးတွေ အိမ်ရှေ့ဖြတ်တိုင်း ပေါက်ကရလေးဆယ်ထဲမှ တစ်ခုကိုအော်ရမှ ထမင်းစားမိန်မည့်သဘောရှိလေးလားတော့ မသိ .. အဲ့ဒီ ကောင်မလေး အိမ်ရှေ့ရောက်ရင်တော့ “အချစ်ဆုံးလေး အသည်းလေး ပူတူးတူးလေး” ရဲ့နောက်မှာ သူ့နာမည်ကိုပါတွဲ အော်လေ့ရှိတယ်။
မန္တလေးမှာကတော့ သိတဲ့အတိုင်း တစ်ချို့အိမ်တွေက ညနေဆိုရင် မိသားစုလိုက် အိမ်ရှေ့ထွက်ထိုင်ကြတာများတယ်။ ဒါကတော့ မန္တလေးရဲ့ လူနေမှု့ပုံစံလို့ ပြောလည်းရမှာပါ။ အဲ .. အဲ့ဒီ ကောင်မလေးရဲ့ မိသားစု အထူးသဖြင့် သူ့အဖေ၊ သူ့အမေ နဲ့ ဦးလေး ဒေါ်ဒေါ်လေးတွေပါ ညနေဆိုရင် အိမ်ပြင်ထွက်ထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေက လူအုပ်တောင့်သလားမမေးနဲ့ အသံလည်း ဘာအောင် သလဲလို့တော့ မမေးနဲ့တော့ ဗျာ .. သူတို့အိမ်ကလူတွေရှေ့လည်း အဲ့ဒီ အသည်းလေးတို့ ဘာလေးတို့ ဆိုပြီး ကောင်းမလေးနာမည်နဲ့ပါ တွဲအော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖြတ်လာတိုင်း အဲ့ဒီ ကောင်မလေးအဖေကတော့ မျက်မှောင်ကြီးကုတ်ပြီး ဒေါသမီးတွေဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ အကြည့်နဲ့ပေါ့။
တစ်ရက်မှာ . . . . .
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက် .. အဲ့ဒီ ကောင်မလေးအိမ်ရှေ့အရောက်မှာ စက်ဘီးကို မတ်တပ်ရပ် နင်းတုန်း ချိန်းချော်သွားရာ စက်ဘီးဘောင်နဲ့ သူ့( )နဲ့ ရိုက်ပြီး ၀ုန်း ကနဲ လဲကျပြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတော့ ဘာရယ်လို့မသိကြပေမယ့် နောက်လှည့်ကြည့်မှ
အဲ့ဒီကောင် လမ်းမပေါ်မှာ သူ့ဟာသူကိုင်ပြီး လူးလှိမ့်နေလေရဲ့ ဗျာ။ အဲ့ဒီကောင်မလေး အဖေက ပြေးလာပြီး တတွတ်တွတ်နဲ့ ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ။ နောက် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ပါ အုံလာပြီး သူ့ကိုပြုစုနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကတော့ တကယ့် သူငယ်ချင်းကောင်းပီသသူများလားတော့ မသိ .. ခပ်ဝေးဝေး လမ်းဒေါင့် တစ်နေရာမှ ရပ်ကြည့်နေပါတော့တယ် ဗျာ။ လူတွေက သူ့ကို တော်တော် နှာနှပ်ယူနေရပုံရတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ သူ့ဟာသူကိုင်ပြီး ကွတကွတနဲ့ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး စက်ဘီးကိုတွန်းပြီး လျှောက်လာပါတော့တယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဖုန်ပေါတဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့လမ်းမပေါ်လူးထားလို့လားတော့မသိ ပေပွနေလေရဲ့ ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နားရောက်တော့လည်း ၀ိုင်းမေးကြပေမယ့် မျက်ရည်တွေဝဲပြီး စကားမပြောနိုင်သေးဘူး။ သူ့ဝေဒနာက တော်တော့်ကို ကြေမွတဲ့အထိ ခံစားနေရပုံပဲ ဗျာ။ (မှတ်ချက်။ ။ အဲ့ဒီ ဝေဒနာ ဘယ်လောက်ထိပြင်းသလဲဆိုတာကို ခံစားဖူးတဲ့ ယောင်္ကျားလေးများ သာသိပါလိမ့်မယ်။) တော်တော်လေး .. ကြာမှ “ဟေ့ကောင် မင်းကို ဟို .. အန်ကယ်ကြီး ဘာတွေလာအော်နေတာလည်းလို့မေးတော့” သူငယ်ချင်း ဖြေလိုက်တာက “မှတ်ပြီလားကွ .. မှတ်ပြီလားကွ .. အော်ချင်အုံးကွ ငါ့သမီးနာမည်” လို့ဖြစ်ပါတော့တယ် ဗျာ။
Posted by MYO HAN HTUN at 10:03 AM4comments
ခံစားပါရစေ . . .
Posted by MYO HAN HTUN at 5:12 PM 1 comments
ဒီနေ့ Honour Certificate တစ်ခု ရခဲ့ပါသည်။ ထို Certificate ကတော့ Signification Contribution အတွက် Appreciation Certificate တစ်ခုဖြစ်ပြီး Web Designer/Web Developer Award အတွက်ရခဲ့ခြင်းပါ။
ဒီပုံကတော့ “အန်ကယ်” တို့ “ဦးလေး” တို့ “ဦး” တို့ မကြာမကြာ အခေါ်ခံရသော “ကိုတိုး” ဆိုတဲ့လူပါ ဗျာ။
Posted by MYO HAN HTUN at 10:45 PM 11 comments
Labels: Honours, Myself
အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းများသည်ကား လည်ပင်းညစ်တတ်ကြသည်။
Posted by MYO HAN HTUN at 10:04 PM0comments
တခေါင်းလုံးစွတ်စွတ်ဖြူနေတဲ့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးများကို တွေ့ရခဲ၏။ ဒါကိုအမိအရ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ခြင်းပါ။
ဆံနွယ်တွေ ဖွေးဖွေးဖြူတဲ့အထိ ချစ်ကြသူများ
Posted by MYO HAN HTUN at 9:52 PM2comments
“အမာ .. ရေ .. အမာ ..” “အမာ .. မအမာ” ဟုအသံသေးအသံကြောင်များဖြင့် အော်သံများသည် ကျွန်တော်တို့ကျူရှင်မှ ညမိုးချုပ်ပြန်လာကြတိုင်းဖြစ်လေသည်။ ထို “အမာ” ဆိုတဲ့ နာမည်ပိုင်ရှင်ကား တစ်ခြားမဟုတ် လူထုဒေါ်အမာ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဟုတ်ပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့သည်ကား အသက် ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၊ စက်ဘီး ကိုယ်စီဖြင့် အယောက် ၂၀ လောက်တော့ ရှိမည်ထင်သည်။ ကျူရှင်မှ ညမိုးချုပ်ပြန်လာတိုင်း ၈၄ လမ်းတစ်လျှောက်မှ အသိမိတ်ဆွေနာမည်များ၊ သူငယ်ချင်းနာမည်များ၊ နှင့် အခြားခြားသောဆိုင်းဘုတ်များကို နောက်ပြောင်အော်ဟစ်ကြသည်က ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။
“ဟေ့ အသည်းလေး မ(....) ကို ဒီနေ့အိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဟေ့” ဟု ကောင်မလေးတွေအိမ်ရှေ့နားအရောက်တွင် အော်ဟစ်ကြခြင်း၊ “ဗျို့ ဦး(....) ယောက်ခမကြီး ကာရာအိုကေဆိုင်မှာတွေ့တယ်နော်” လို့ ထိုသို့တဖန်အော်ကြခြင်းကား ကျောင်းမှ ကောင်မလေးများရဲ့ အဖေနာမည်းများပင်၊ အတန်းဖော် ကောင်မလေးများရဲ့ အဖေ အမေ နာမည်များသိလို့ကတော့ ထိုအိမ်ရှေ့ကို ဖြတ်တိုင်း အော်ကြမည်မှာ ဧကန်။ လူထုဒေါ်အမာဆိုသည့် အဖွားကြီးတောင် အေးအေးဆေးဆေး မနေရ၊ သူ့နာမည်ကို ပင် စစနောက်နောက်အော်ခဲ့ကြတာသာ ကြည့်ပေတော့။ လမ်းတစ်လျှောက် သီချင်းတကြော်ကြော်ဆိုကြတဲ့သူက ဆို၊ အော်တဲ့လူက အော်။ ဒါကတော့ ပျော်စရာ။
သူငယ်ချင်းများထဲတွင်တော့ လူဝကြီးတစ်ကောင်ပါသည်။ အဲ့ဒီကောင်ကြီးက ဂျပန်ဆူမို နပန်းသမားလား အောင့်မေ့ရတယ်။ ၀ တာကတော့ ကမ်းကုန်နေသည်။ အသံကလည်း အောင်မှအောင်၊ သူက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင် ရှေ့ဆောင်။ သူအော်တိုင်း နောက်မှ လိုက်အော်သူကအော် ရယ်တဲ့လူက ရယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဆရာဦးမျိုးညွှန့်ကျူရှင်ရှေ့အရောက်တွင်ပေတည်း။ ဆရာဦးမျိုးညွှန့်ဆိုသည်ကား မန္တလေးမှ နာမည်ကျော် ကျူရှင်ဆရာတစ်ဦး။ ဖက်တီးကတော့ အရှေ့ဆုံးမှ တိုင် လိုက်သည်ကား “မျိုးညွှန့် နှာခေါင်း” .. အဲဒါကို နောက်မှကျွန်တော်တို့တစ်တွေက လိုက်၍ “ပေ တစ်သောင်း” ဟုအော်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ အော်တဲ့ အသံအဆုံးမှာတော့ ဆရာဦးမျိုးညွှန့် ကျူရှင်မှ စာသင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် တ၀ါးဝါးတဟားဟား နဲ့ရယ်ပြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ရှာပါသည် ဆရာကြီးနှာခေါင်းခမျာ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကြား ပိုမိုထူးခြားစွာ ရှည်နေပါသည်။ နောက်ပိုင်းတော့ ညီလေးများက သူ့ကျူရှင်တက်ကြသဖြင့် ဆရာနဲ့ စကားပြောဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတလေကြတော့ ၈၄ လမ်းမှပေါ်က စတိုးဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီး အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းလူဝကြီးကို လက်ညှိးထိုးရင်း “အမရေ သူ့အရွယ်အတွင်းခံဘောင်းဘီ ရှိလားလို့” ၀င်မေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများကလည်း ရှိသေးတယ်။ အများစုကတော့ “မရှိပါဘူး မောင်လေးတို့ ရယ်”လို့ ဖြေကြပေမယ့် တစ်ချို့ အရောင်းစာရေးမများကတော့ “ဟင့်အင်း ... မင်းတို့လို ဆိုဒ်သေးသေးလေးတွေ အတွက်တော့ ရှိတယ်” လို့ အထင်အမြင်သေးတဲ့ အကြည့်နဲ့ပါတွဲပြီး
ဘာရယ်မှတော့ မဟုတ်ပါ၊ လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝ နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် ဟေးလားဝါးလား အော်ကြခြင်းများကို ပြန်ပြောင်းသတိတရဖြင့် ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MYO HAN HTUN at 2:18 PM 1 comments
ချစ်ရတဲ့ “မမ” ကို
Posted by MYO HAN HTUN at 3:19 PM3comments
Posted by MYO HAN HTUN at 1:43 PM6comments
Posted by MYO HAN HTUN at 10:02 AM3comments
Posted by MYO HAN HTUN at 10:44 PM2comments
ကြည့်လေဗျာ “ဦး” တို့ “ဦးလေး” တို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသက်ကကျွန်တော်နဲ့မတိမ်းမယိမ်း ၂၀ ကျော် ၂၅ ၀န်းကျင် ကျွန်တော်က ၂၈။ ခေါ်စမ်းပါဗျာ “ကိုကို” တို့ “အကို” တို့ “ကိုကြီး” တို့။ ကလေးစိတ်မပျောက်သေးဘူးပြောပြော၊ လူကြီးစိတ်မဆန်ဘူးပြောပြော ထိုသို့အခေါ်ခံရပါက ဒေါသသည် နဘံမိုးယံသို့ တက်သွားလေတော့သည်။ ထိုသို့အခေါ်ခံရတိုင်း ခေါင်းမွေးဖြူနေပြီလား သို့တည်းမဟုတ် အရေတွန့်နေလို့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲလှည့်ပတ်ကြည့်တဲ့သူက ကျွန်တော်။ ထိုသို့ ဖြူခြင်း၊ တွန့်ခြင်းဆိုတာရယ်မရှိ။ တစ်ခါကဆိုရင် ကျွန်တော့်အသက်ရဲ့ ၆ နှစ်လောက်သာငယ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါ်ပုံက “ဦးလေး” .. နောက် ၄ နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ ဟာလေးကျပြန်တော့ “ဦး” .. သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျတော့ “သမီး” “သမီးကလေ” စသည်ဖြင့် ငယ်မူပြန်ပါလေရော။ ဟိုးတစ်ခါ ရန်ကုန်ရောက်တုန်း ကိုယ့်ထက် ၁ နှစ်တောင်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခေါ်လိုက်ပုံက “အန်ကယ်” တဲ့ဗျာ။ ထိုသို့ အန်ကယ် အခေါ်ခံရစဉ်အချိန်ခါက မုတ်ဆိတ်မွေး နှုတ်ခမ်းမွေး ဗရဗျစ်နဲ့ ကုလားဒိန်ရုပ်ပေါက်နေလို့များလား။ ထိုသို့လည်း မဆိုနိုင်သေးပါ။ ထိုသူမကတော့ လွန်လွန်းလေပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ New Year ၁ ရက်နေ့က ကျောင်းနားပတ်ပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ သစ်ပင်တွေကြား လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ ဘုရားစာရွတ်နေမိတယ်။ လူလည်း စိတ်အေးချမ်းတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုအေးချမ်းမှု့ကား အခန်းပြန်လာတော့ ပျက်ပြယ်လေပြီ။ အခန်းနားက ကောင်မလေးက “ဦး” “ဦးဆီမှာ အိမ်ရှင်ရဲ့ဖုန်း နံပါတ်များ ရှိလား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနောက်မှာတော့ ဒေါသကဘယ်ကထွက်လာလဲတော့ မသိ။ မနည်းဆွဲထားရတယ်။ နောက်တော့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီး အခန်းပြန်ခဲ့တယ်။ ထိုသို့သော အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတစ်ချို့က “ကိုတိုးရာ ထားလိုက်စမ်းပါ သူတို့ ဦးခေါ်လည်း သမီးရဲ့ ဦး တို့ ဦးရဲ့သမီး တို့ ဘာတို့ပေါ့” လို့ဆိုကြပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ပျက်မိတာကတော့ အမှန်ပါ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ထိုသို့ဆိုပြန်တယ် “ကိုတိုးက အတည်ပေါက်ကြီး နေလို့ သူတို့က ကိုတိုးကို ခင် ချင်လို့ စ တာတဲ့” မဟုတ်သေးပါဘူး “ခင် ချင်ရင်လည်း ထမင်းစား ဖိတ်ပေါ့ ဗျာ”။ မည်သူတွေဘယ်လိုပင်ဆိုပါစေ ထိုသို့ခေါ်သော မိန်းကလေးများကို ၀ါးစားမတတ်စိမ်းစိမ်းကြီးမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးစိုက်ကြည့်တတ်တဲ့ လူက ကျွန်တော်ပေါ့ ဗျာ။
Posted by MYO HAN HTUN at 1:58 AM 13 comments